Qurbajoogta adkeysiga leh ayaa beeniyay Bixinta Wadahadalka Qaranka Paul Biya (War Saxaafadeed) - TELES RELAY
ACCUEIL » kale Qurbajoogta adkeysiga ah oo beeniyay Bixitaanka Paul Biya ee Wadahadalka Qaranka (Sii-daynta Wararka)
Qurba-joogta "adkeysiga" ayaa diiday diidmada Paul Biya ee wadahadalka qaran (War-saxaafadeed)
Madaxa dawladda, Paul Biya, khudbaddiisii ​​aad loo sugayay ee uu u qabtay ummadaha Talaadadii la soo dhaafay, wuxuu ku dhawaaqay shirweynaha dhammaadka Sebtember 'wada hadal qaran' oo ku saabsan xasaradda dilaaga ah ee gobollada Waqooyi-galbeed iyo Koonfur-galbeed. Cameroon
« Waxaan go’aansaday inaan kulmo, dhamaadka bisha hadda, wadahadal weyn oo qaran oo u oggolaan doona [...] in aan baadho dariiqooyinka iyo qaababka aan ula kulanno himilooyinka qoto dheer ee dadka Waqooyi-galbeed iyo Koonfur-galbeed, laakiin sidoo kale dhamaan qaybaha kale ee qarankeena "Ayuu yiri Madaxweyne Biya, isagoo sheegay in uu shir guddoomin doono Ra'iisul Wasaare Joseph Dion Nguté isla markaana uu la imaan doono qeybaha kala duwan ee bulshada, oo ay ku jiraan qurbaha.
Ogeysiis ka dhashay falcelinno kala duwan. Qoraal ahaan, qurbajoogta loogu yeero adkeysi ee diidmada leh ayaa diiday diidmada Paul Biya ee wadahadalka qaran iyagoo dejinaya shuruudaha.
Hoos kadhagayso sii deynta.
Annaga, xoogagga qurbo-joogga reer Cameroon ee adkaysta, waxaan shir aan caadi ahayn ku qabanay 11 Sebtember 2019 magaalada Paris, si aan u eegno ku dhawaaqista furitaanka wada-hadallo gaar ah oo ka dhaxaysa waddanka Cameroon by Paul Paul BIYA.
Waxaan rajeyneynaa inaan halkaan ku xasuusano maadaama tan iyo markii uu dhibaatadu ka dilaacey aag ku hadla luuqada Ingriiska ee Cameroon, Qurbajoogta reer Cameroon ay si joogto ah ugu baaqeen nidaamka Yaoundé inay ku lug yeeshaan wada hadal aan dhameystirneyn oo shuruud la’aan ah.
Waxaan kale oo aan xasuusanahay in furitaanka wadahadal loo wada dhan yahay ay ku jiraan dhammaan baahiyadeenna, kuwa ugu dambeeyay kuwaas oo kala ah:
Paris 18 May 2019, Washington 22 Juun 2019 Geneva 29 Juun 2019, iyo Brussels 07 Sebtember 2019.
Waxaan carrabka ku adkeynay in kasta oo codsiyadaas badan, haddana kaligii talisnimada iyo xasuuqii Yaoundé uu door biday adeegsiga khiyaanada iyo xoogga, oo gobollada Waqooyi Galbeed iyo Koonfur Galbeed ku rogay fowdo guud. horeyba waxay ugu kaliftay khasaarihii ku dhowaad nolosha 3000 waxayna sababtay qaxooti badan oo 500 000 ah oo barakacay.
Waxaan cadeyneynaa in kasta oo talooyinka Mareykanka, Midowga Yurub, Kanada iyo dalal kale oo saaxiibtinimo ah, in Paul BIYA uu mudnaanta koowaad siiyay dagaalka, uu wax u dhimayo horumarka aadanaha ee dadka dhaawaca ah ee reer Cameroon.
Intaa waxaa dheer, innaga oo ah qurbo-joogte iska caabbinta ah, waxaan jeclaan lahayn inaan hoosta ka xarriiqno, in qalalaasaha Ingriiska, aan u nimaadno qalalaase siyaasadeed oo culus, ka dib qabashadii doorashada ee ay M BIYA qabatey munaasabadda doorashada. doorashada madaxweynaha ee 7 Oktoobar 2018. Qeybtaan, Madaxweyne Maurice Kamto, Master, Michele Ndoki, Christian Penda Ekoka, Pauleric King, Serval Abe, Albert Dzongang, Celestin Djamen iyo 114 MRC u dhaqdhaqaaqayaasha ayaa wali lagu hayaa xabsiyada Yaounde, ee iyagoo raacaya meelahii nabdoonaa ee 26 Janaayo 2019, 1er Juun 2019 iyo 8 Juun 2019.
Maxaabiis badan oo siyaasadeed, sida kuxigeenka 1er ee MRC, Mamadou Mota, waxaa lagu qaaday jirdil rabshad dhif iyo naadir ah nidaam xuquuqdooda.
Madaxweyne Maurice Kamto, xubnaha isbahaysigiisa iyo kuwa u ololeeya 114 MRC ayaa hada lagu maxkamadeeyaa maxkamada militariga, iyada oo si cad loogu xadgudbay shuruucda iyo heshiisyada caalamiga ah.
Hogaamiyaasha sababa Anglophone, sida Mr. Sisiku Ayuk Tabe iyo kuwa kale, waxaa isla maxkamada ku xukuntay ciqaabta sumcadda leh. Marka la eego waxa kor ku xusan, annaga oo ah Qurba joogta reer Cameroon, waxaan si rasmi ah ugu dhawaaqaynaa in xaaladaha hadda jira, aan la xiriiri karin wada hadal uu biloowday Paul BIYA iyada oo aan wax shuruud ah la buuxin. Si loo ogaado:
- Siidaynta dhamaan maxaabiista siyaasadeed ee la qabtay laguna xidhay duruufaha qalalaasaha Anglophone iyada oo aan lagaranaynin.
- Siidaynta dhamaan maxaabiista siyaasadeed ee ku xirnaa Janaayo 26 2019, 1er June 2019 iyo 8 Juun 2019 meeraha cad.
- Abuuritaanka qaab-wadatashi wadatashi hore, oo ka kooban dhammaan saamileeyda oo lagu heshiiyo qorshe-hawleed isku waafaqaya doodaha lagu horumarin doono.
- Aasaasidda guddi ka kooban khubaro madax-bannaan oo mas'uul ka ah la socodka howlaha.
Annagu waxaan nahay Qurbajooga reer Cameroon ee adkaysi u baahan, sidaa darteed waxaan u soo gudbineynaa kaqeybgalkeena wadahadal kasta, si aan ugu qanacno shuruudahan ugu yar. Sidaa darteed,
- Diido sida ay tahay, dalab kasta oo wadahadal ee kaligii taliyihii xasuuqa Paul BIYA. - Ku dhawaaq sii xoogsiga qaadashada joogitaanka Paul Biya iyo ergooyinkiisa dibedda.
- Ku dhiirrigeli nidaamka Cameroon in uusan tixgelin sii joogitaanka Paul Biya ee Golaha Guud ee Qaramada Midoobay ee soo socda ee New York.
- Ugu yeer Cameroonians, Cameroon iyo Qurbajoogta in la abaabulo, iyadoo la eegayo xoojinta halganka xoraynta ee Cameroon, waa harqoodka kalitalisnimadan qalalaasaha leh.
Luta sii socota
Taageerayaasha madaxweynaha Paul Biya waxay soo bandhigaan wadahadal